Yintoni eyenza ifilimu ibe yi-"Cult" Film?
by UChristopher McKittrick
Indlela "iCult Classic" yazalwa ngayo
Iifilimu ezinjengokuthi "Uhambe Ngumoya" kunye "U-Godfather" unconywa njengomsebenzi wobugcisa ukususela kwithuba abalandeli bokuqala ababona ngalo, kwaye impumelelo yabo yebhokisi kunye nebhokisi ibonisa loo nto. Kodwa zikhona ezinye iifilimu ezikwazi ukunqoba izihlwele ngaphezu kwexesha elide, ukufumana ngokukhawuleza abalandeli kunye nokunyaniseka ngokusebenzisa i-word-of-mouth ekusasazeni ngabo baziva banomdla ngefilimu.
Igama elithi "ifilimu yecawa" (kwaye emva koko "inkolo yobudala" njengemifanekiso yamabhayisikobho) isetyenziselwa ukuchaza ibhayisikobho eye yavelisa i-fanbase encinci, ecacileyo kwaye epheleleyo, ekhulayo ngaphezu kwexesha.
Ngoxa i-blockbuster ephumelelayo kakhulu i-blockbuster franchises efana ne " Star Wars " kunye ne " Harry Potter " inomdla onomdla wokuba iifilimu zibonakala zinempembelelo efana nenkolo, igama elithi "ifilimu yecawa" ngokubhekiselele ngokubhekiselele kumafilimu ukuba nangona bephumelele kakhulu ngemali, abalandeli.
Nangona kukho iibhayisikobho eziqhubhisa ibhokhwe okanye ngaphantsi kwebhokisi kwiofisi malunga neveki zonke eziqhubekayo ukuphumelela ngaphezu kweefestile ezimbalwa, iifilimu ezimbalwa zikhuthaza ukuzinikela okunzulu okuya kuthi bahlakulele oku kulandelayo. "Iinkonzo" ezinikezelwa kule mifilimu zikhula njengoko ezo festile ezithandekayo zisasaza igama malunga nale nto engaziwayo, kodwa (ngokwezimvo zabo) kufuneka-ubone ifilimu.
Imbali yeeFilimu zeCult
Ngexesha laseHollywood yaseklasini, ambalwa amafilimu anethuba lokuhlakulela ukulandelwa kwenkolo ngenxa yokuthengiswa rhoqo kwiindawo zokuzonwabisa kunye nokungabikho kokusabalalisa kwimidiya njengomabonwakude okanye ividyo kwikhaya eliya kubavumela abaphulaphuli ukuba babone ama-movie ngaphandle kweemidlalo zabo zokuqala.
Nangona kunjalo, iifilimu ezimbalwa ezingezizo eziqhelekileyo zafumana ukungaziwayo kwimizuzu yokujonga ebusuku, njengengqungquthela ye-movie ye-horror ye-1932 yeMGM "Freaks."
Kwiminyaka kamva, ithelevishini yayiya kulandelwa. Ukufuna iinkqubo ezincinci, iimakethe ezininzi zethelevishini ziza kudlala ihlaziyi elifihlakeleyo, intshwankqiso okanye iifilimu eziqinileyo ngokugqithiseleyo okanye "njengeefilimu zasebusuku." Ezinye zale nkqubo ziza kubandakanyeka umkhosi onjenge-Los Angeles 'Vampira noFiladelphia kaZacherley, abantu abadumile baza kunceda iiprogram ziphuhlisa ububukeli obuqhelekileyo.
Ngasekuqaleni kwee-1970, iindibano ezininzi kwizixeko ezinkulu zaqala ukudlala "iifilimu" njengamafilimu ephakathi kwamabhiyoki, "zihlala zihlala ixesha elide okanye lide elide xa iikitikiti zithengisa. Ngokomzekelo, "uEl Topo" (1970), "I-Pink Flamingos" (1972), kunye ne "The Harder They Come" (1972), apho bonke babephethe ixesha elide kwiindawo zokuzonwabisa ezifana ne-New York City ebizwa ngokuba yi-Elgin Theater. Enyanisweni, ifilimu eyaziwayo kakhulu phakathi kwexesha lonke, "I-Rocky Horror Picture Show," sele ikhululwe ngokukhawuleza ukususela ngowe-1976. Abahlala rhoqo befunda ingxoxo kunye nefilimu, bagqoke njengabantu abathandayo, baphosa izinto kwi-skrini (kakhulu ukucaphukisa abanikazi beendawo zokuzonwabisa kunye nabasebenzi bokucoca).
Nangona ukuthandwa kweefilimu zobusuku bobusuku kuncipha ngokusungulwa kwamajelo asekhaya, awalitshintshanga abaphulaphuli beentlanga. Enyanisweni, i-VHS yanceda ukusabalalisa ukuthandwa kwenani elingabonakaliyo lweefilimu zecawa, ezinika abaninzi ukuba bangayixabise iifilimu zobomi obutsha.
Ngelixa iifilimu zenkcubeko zivela kwi-campy science fiction kwiimifanekiso ezibucayi kunye neento zonke eziphakathi, zikho impawu ezimbalwa ezininzi zefilimu ezabelana ngazo:
Enye imigaqo yokuba zonke iibhayisikobho zenkcubeko zifana nento yokuba abayithandwa ngabantu abaqhelekileyo okanye kwi-ofisi yebhokisi ... ubuncinane ekuqaleni.
Emva koko, le nkcazo ye "inkolo" ithetha ukuba ezi ifilimu zinemiyalelo encinci kodwa ezinikeleyo.
Kwiimeko ezininzi, iifilimu zecawa ziqala njengamafilimu aphantsi kwebhajethi ngokukhululwa okukhawulezileyo. Kwabanye, i-studio enkulu yebhajethi ishicilelwa ehluleka ukuthengisa amathikithi ngexesha lokuqhutyelwa kwezemidlalo. Kuzo zombini iimeko, abaphulaphuli abanethuba lokubona ezi bhanyabhanya zisasaza ilizwi malunga noko bakubonayo. Ngokukhawuleza, ukuthandwa kwebhayisikobho kukhula ngendlela engalindelanga kwaye engavumelekanga, ngamanye amaxesha phakathi kwabaphulaphuli abangayihoxanga i-movie kwindawo yokuqala.
Nangona amafilimu amaninzi enkcubeko agqugquzela ukuxhaswa ngumxhasi ngokungaxabiswa ngabaphulaphuli abaqhelekileyo, abanye baba yihlelo lokuhlula ngenxa yesizathu esichaphazelekayo: kuba ziimabhayisikobho ezimbi .
I-"Reefer Madness" (1936), " Cwangcisa 9 kwi-Out Space" (1959) kwaye "Igumbi" (2003) ngokuqhelekileyo libhekwa njengezithathu zeemafilimu ezibi kakhulu ezenziwe, kodwa oko kukuthi kungani abanye abalandeli bebafumana .
Le mi movie emithathu ingumzekelo ombalwa weefilimu ezimbi ezibonakalayo ezibonakalayo phakathi kweefilimu zobusuku.
Ezinye iikhamera zenkcubeko ziyaziwayo nangona i-bhajethi yazo ephantsi kunye nempumelelo yomgangatho wokuvelisa. I-Troma Ezononophelo zikhuphe iindidi ezininzi zefilimu ezithathwa ngokubanzi njengeklasi yezenkolo nangona ezininzi iifilimu zinebhajethi ephantsi kakhulu. I-movie ye-Troma eyaziwayo kakhulu, ngo-1984 "I-Avenger Adversive," yayiphumelele kangangokuba i-studio ezizimeleyo zatshintshiswe kwiinkwenkwezi zesini kunye neengqungquthela zovalo-moya (zokoyikekayo kunye ezihlekisayo) emva kokukhululwa kwayo kwiphulo lokubuyisela impumelelo yalo.
Ngakolunye uhlangothi, iifilimu zenkcubeko zithi " Ubusuku Bokufa Abaphilayo " (1968) kunye ne " Ababi Abafileyo " (1981) baba ziintandokazi zokuthanda iifilimu ezingabonakaliyo ezifunyanwayo xa zikhutshwe ekuqaleni. Enyanisweni, kuthethwa ukuba ezi zifilimu ziye zavela kwimeko yabo yezenkolo njengoko ukuhlonelwa komgangatho wabo ngoku kwasasazeka.
Amafilimu amaninzi amaninzi ayaziwa ngenxa yeengxabano okanye "ngaphantsi komhlaba". Iifayili ezinjengokuthi "I-Rocky Horror Picture Show" (1975) yaqhekeza izibilini zesondo, ngoxa i-" Boondock Saints " (1999) yaba yimpumelelo enkulu kwiDVD emva kokukhululwa okungenakuphumelela kwimidlalo emihlanu yezobuqhetseba. Nangona abaphulaphuli kunye nabagxeki abaqhelekileyo banokufumana into ephazamisayo okanye ephazamisayo, abanye bayamkela ezi bhanya-moya ukuze banike abantu abaphulaphule into eyahlukileyo.
Ngokomzekelo, ngaphambi kokusabalalisa idijithali, iifilimu ezibuhlungu ezivela kumafilimu asebenza kumazwe afana neJapan, iSpeyin, neItali ayathengiswa kwiVHS kunye neeDVD ngamaqhawe aseMerika alo hlobo, kubandakanywa ama-movie angabonanga ukukhululwa kweemviwo eMelika.
Phakathi kwabalandeli befilimu, ukuba "bayazi" malunga namafilimu angabonakaliyo namancinci awaziwayo sele abe ibheji lokuziqhayisa.
Ngelixa ezininzi iifilimu eziqhelekileyo ziphuma ebaleni loluntu emva kokugqitywa kweemidlalo zokuqala zengqungquthela, ukuthandwa kweefilimu zenkcubeko ziqhubeka zikhula. Nangona ukugqithiswa kweefilimu zetekisi ezisetyenziselwa ukusasaza phakathi kobusuku bokuhlolwa kwimizi kwaye zihlala ziboleke iVHS okanye iikopi zeDVD, intengiso ye-intanethi kunye nokuthunyelwa kwe-digital kuye kwandisa ukunyaniseka kweefilimu ezithile.
Abafaki beefilimu kumazwe ngamazwe banokwabelana nabo ngentshiseko. Umzekelo, " I-Big Lebowski " (1998) yayinebhokisi edibeneyo yeofisi yebhokisi ekukhutshweni kwayo kokuqala, kodwa ukuthanda kwayo okuqhubekayo kuye kwaphefumula i-"Lebowski Fest" yaminyaka yonke ebhiyozela yonke into yefilimu kunye nenkolo ebizwa ngokuba yi "Dudeism" emva igama lesiteketiso somlingisi oyintloko.
Zimbalwa iifilimu ezinokuthi zenze olo hlobo lwefuthe kubaphulaphuli kwaye zikhuthaze ukuzinikezela okunjalo kubalandeli babo, okwenza amafilimu enkcubeko mhlawumbi uhlobo oluthile lweefilimu - ukuzonwabisa okungapheliyo kubalandeli babo abazinikele kakhulu!
Iimfono eziphambili ze-Baseball
Iimboniselo eziphezulu zeBond 10 eziPhambili
Imbali yeFrench 'Alien'
Iimpapasho ezi-10 eziphezulu ze "Catfight": Iimfazwe eziLungileyo eziLungileyo kwiFilimu
Kuthetha ukuthini i-Blu-Ray kwaye ichaphazela njani amafilimu?
Imibala ye-Lightsaber: Apho bavela khona kunye noko bathethayo
Imithetho ye-9 yeBhola kunye neSicwangciso
Indlela yokuhlolisisa iifowuni zakho zePlay Spank
Iinkcukacha ezibalulekileyo malunga neCharlemagne
I-Highest Paying Jobs Postal
I-Anyang: I-Bronze yobudala be-Shang Shang Dynasty I-Yin, eChina
Eminye iindawo eziMbane kwiMithombo yamagqabi aseGesi
Saint Elizabeth Elizabeth Seton, uPatron Saint of Distress
ULugh, oyiNtloko yeZakhono
I-Hall ye-PBA Hall
Ubuncwane beCelestial of the Constellation Centaurus
Ukuqhaqhazela iHlabathi neLuqhwa ngeTyuwa
Ukulungiswa kwabafundi ngexesha leKlasi - njani kwaye nini?